जापानमा कति चोटी भुकम्प जान्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > History > जापानमा कति चोटी भुकम्प जान्छ ?
नेपालमा २०१५को भुकम्प निकै ठूलो थियो। यसले थुप्रै जन धनमा क्षेति पुर्याएको थियो। त्यस्पस्चात नेपालमा स-साना पराकम्पाहरु गइ नै रहेका छन्। हुन पनि हामी भुकम्पको लागि सचेत हुनु पर्दछ। जापान भुकम्प गइ रहने देश हो। यहाँ दिन दिनै भुकम्प गइ रहन्छ। भुकम्प गइ रहनुको कारण जापान ४ टेक्टोनिक प्लेटको इन्टरसेक्सनमा रहेकोले हो। यी प्लेटहरु एक आपसमा रगडिने, सर्ने, ठोक्किने भएकोले जापानमा भुकम्प आई रहन्छ। यहि कारणले पनि जापानमा थुप्रै एक्टिभ ज्वालामुखीहरु छन्। यस्तो सुन्दै आगो माथि रहेको देशले येति धेरै बिकाश कसरि गर्यो होला ? अचम्मको कुरा छैन त।
धेरै जसो भुकम्प साना हुन्छन
टेक्तोनिक प्लेटको हल्का हलचलले पनि स-सानो भुकम्प गइरहन्छ। कुनै कुनै भुकम्प त यति सानो हुन्छन कि सिस्मोग्राफले मात्र पट्ट लगाउछन। सामान्यतया दिन दिनै जाने भूकम्पको मग्निट्युड धेरैमा ४.० को हुन्छ। यति सम्मको पराकम्पले सामान्य जिबनमा केहि हलचल आउदैन। मानिसहरु यति सम्मको भुकम्पको मतलब पनि गर्दैनन्। तर पनि यति धेरै भुकम्प गैरहने भएपछी घर, बिल्डिंग र अन्य निर्माणमा क्षेति त पुग्नु पर्ने हो नि ? जापानले यो ’bout पहिले नै सोची सकेको थियो।
जापानमा संरचना निर्माणका नियम
जापानले संसारकै पहिलो संरचना निर्माणको नियम सन् १९२४ मा बनाएको थियो। यो नियम १९२३ को कन्तो क्षेत्रमा गएको भुकम्प पछि लागु गरिएको हो। त्यो भूकम्पमा पनि १ लाख ४० हजार भन्दा बस्हिले ज्यान गुमाएका थिए। सन् १९८१मा यो निर्माण नियमलाइ अझ कडा बनाइयो। यो नियम अनुसार बनाएका संरचनाहरु मध्यम वर्गका भूकम्पहरू सहन सक्ने र ठूलो भुकम्प जादा पनि नभत्किने भए। यी नियमले गर्दानै होला जापानमा सानो तिनो भुकम्प जादा मानिसहरु त्यति आतिदैनन। नेपालमा जस्तो घर वा बिल्डिंगबाट टाढा भाग्नु पर्दैन।
जापान झन्डै २००० माईल लामो छ
दिनमा थुप्रै भुकम्प जाने भए पनि जापानको सबै तिर महसुस हुने भने हुदैन। जापानको टापू नै टापुको देश भएको र उत्तर मा रसिया देखि तल ताइवान सम्म फैलिएको छ। यसलाई पूर्वको गालापोगास पनि भनिन्छ। कुनै कुनै तापुहरुले त एक अर्कालाइ छुदैनन। त्यसैले जापानमा भुकम्प गैरहे पनि हजुरको जापान भ्रमणमा हजुरल एके चोटी पनि पराकम्प महसुस नगरी बित्न सक्छ।